jewel’s songs ခံစားမှုများ – Everybody Read TChen
Category: jewel’s songs ခံစားမှုများ
“A Shape of You “
ဂျူဝဲလ်က (၂၀၁၃ ထင်တယ်) Emmy ဆုပေးပွဲတစ်ခုမှာ အရင့်အရင်က သေဆုံးသွားတဲ့
ရုပ်ရှင် ဂီတ အနုပညာရှင်တွေ အတွက်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ဆိုပေးပါတယ်။ သီချင်းမဆိုခင်မှာ
သူက ဒီသီချင်းလေးကို မနှစ်က ကင်ဆာ နဲ့
ဆုံးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးပေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူ့မှာ
အဲ့လို လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကို ဇာတ်လမ်း လုပ်ပြီး ရေးတဲ့ သီချင်းတွေအများကြီး
ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံး အခွေ Pieces of You မှာပါတဲ့ Adrian ၊ ဒုတိယအခွေမှာပါတဲ့ Fat Boy စတာတွေပေါ့။ ဒီ အခု ခံစားပြီးပြန်ထားတဲ့
သီချင်းကတော့ ခုဏက ပြောသလို သူငယ်ချင်းအတွက်ဆိုပါတယ်။ နောက်
တပုဒ်ရှိသေးတယ်။ Violet Eyes ဆိုတာ
အဲ့တပုဒ်လဲ သူ့ ဒုတိယမိခင်ပေါ့ (ရှိုးပွဲတစ်ခုမှာ အဲ့လို သူက သုံးသွားပါတယ်။
သူ့အမေရင်းက သူ့တို့ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ပစ်ထားခဲ့တဲ့ အတွက် မြန်မာလိုဆို သူ့
မွေးစားအမေ ပေါ့၊ သူ အသက်ကြီးမှာ တွေ့တာမျိုးပါ ဒါပေမယ့် သူ့အပေါ် အမေလို ညီအမလို
သူငယ်ချင်းလို ကောင်းတဲ့ သူပါတဲ့။ နောက်ကြုံရင် အဲ့သီချင်းကို ပြန်ပြီး
တင်ပါအုံးမယ်။ ခုတော့ ဒီ A Shape of You
ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ကို ခံစားကြည့်ကြပါအုံးနော်။ တချို့ ဆိုက်ဒ် တွေမှာ
သီချင်းကို A Hole In My Heart ဆိုတဲ့
နာမည်နဲ့လဲ ရေးထားတာတွေ မိပါတယ်။
ဒီသီချင်းလေးကို ဘာသာပြန်ပေးမယ်လို့ ပြောထားတဲ့ တယောက်သောသူ အတွက် ပြန်ပေးတာပါ။ သူလဲဘတ်မိရင်
September settled softly
I recall, last time you were here
There’s this longing lonesome and deep
Time stealing swiftly
Children having children of their own
And around life’s merry-go round goes
And there you are wanting what you cannot hold
Just likeawindow to heaven
There’salight shining through
This hole in my heart so I carry it wherever I go
မင်း ရယ်သံ သဲ့သဲ့ဟာ
ရတနာတစ်ခုလို ငါနဲ့ ခရီးလမ်းတွေတလျောက်တူတူလိုက်ပါရင်း
အချိန်တွေက ခိုးသွားတာ မြန်လိုက်တာ
ဘဝရဲ့ သံသရာ စက်ဝန်းကတော့
အရာတွေကို လိုချင်တပ်မက်ရင်း စီးမျော
လင်းဆန်း ရောင်ခြည် ဖြတ်သန်းတောက်ပလို့ပေါ့
LTO, Yangon | MYANMAR
Posted on December 3, 2014 February 7, 2018 Categories jewel's songs ခံစားမှုများ, Uncategorized, Uncategorized1 Comment on “A Shape of You “
အပြင်းပယ်ခံရလို့ နာကျင်ရမှာကိုလဲ မကြောက်ပါနဲ့လေ
မင်းရဲ့ ထိုက်တန်မှုကို ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပါလေ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ နှလုံးသားက သိနားလည်နိုင်တဲ့
တခုတည်းသော စစ်မှန်တဲ့ နာကျင်မှုဆိုတာ
မင်းရဲ့ ခံစားချက်တွေကို မဖွင့်ပြနိုင်တဲ့
ကဲ အဲ့ဒီတော့ မင်းဖွင့်ပြောလိုက်ရဲ့လား
သူတို့ မျက်ဝန်းထဲကိုကော သေချာစိုက်ကြည့်ရဲ့လား
သူတို့ ခံစားရတာ သေချာရဲ့လား
အဲ့လို ခံစားရတဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်ကို
ကျေနပ်မှု ပီတိ လို့ခေါ်ပါတယ်
စိုးရိမ် ပူပန်မှု တွေနဲ့လေ
လုပ်စရာတွေက အများကြီးမှ အများကြီး
ကွက်လပ်နဲ့ နှလုံးသားတွေက နေရာတိုင်းမှာ
ရေထဲမှာ နစ်နေပေမယ့် ရေငတ်မှုတွေနဲ့ လှိုက်ဖိုမောလို့
မျက်လုံးတွေကို မှိတ် ရင်ဘတ်တွေကို ဖွင့်လို့
သဘာဝ ကျကျလေး လိုက်ပါစီးမျောလိုက်ပါ
နေဆိုတာလဲ အပေါ်ကနေ သြကာသ လောက တခုလုံးကို တောက်ပစေဖို့ပေါ့
တို့တွေကတော့ ချစ်ဖို့ မွေးဖွားလာကြတာပေါ့
1st Monday, Dec 2014
LTO | Yangon | Myanmar
Posted on December 1, 2014 February 7, 2018 Categories jewel's songs ခံစားမှုများ, Uncategorized, Uncategorized3 Comments on “Satisfied”
သီချင်းအဟောင်းတပုဒ်ပါ။ ရှင်တို့ကတော့ ဒီည ကျမ ဘာလုပ်လုပ်
လုက်ခုတ်တီးကြမှပဲထင်တယ်။ ကျမကလဲ အဲ့တာကို သဘောကျပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကို ကျမ
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်လောက်က ရေးခဲ့တာပါ။ အသည်းကွဲခဲ့တဲ့ အချိန်တုံးကပေါ့။
ခါးသီးလွန်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး……..ဒါပေမယ့် ဒီသီချင်းကို ကျမ ဆိုတဲ့
အကြိမ်များလာလေလေ အဲအချိန်က တကယ်တမ်းတော့ သရပီ ယူခဲ့သင့်တယ် ဆိုတာ
ကျမ လုပ်ခဲ့တာကို “နောက်ယောင်ခံလိုက်တယ်” လို့ခေါ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ထင်တာက အချိန်တွေ ကျော်လွန်လာတာနဲ့ အမျှ သူက အမြင်မှန်တွေရလာပြီးတော့ တခြား
ကောင်မလေးတွေရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့ဟာ ကျမ တဝက်လောက်တောင် မမွှေးပါဘူး ဆိုတာ
This is an old song, haha of course u guys are cheer for
anything tonight, and I like it
Actually the more I sing the song, the more I feel like
probably could have use therapy
I thought if I would just pass enough time, that you know……he
would have come to his senses and realize that other girls didn’t smell as half
good as I did
အဖြူအမည်း ရုပ်ရှင် ကို
ကိုယ်ကတော့ ဝတ်စုံ အဖြူ
ရှည်ရှည်လေး ကို ဝတ်ပြီး
(ဒါမှမဟုတ်) မာလင်ဘရန်ဒို က
တခါတလေမှာ ကျမ နားတွေ
My friends all say it’s because
I know i’m just passing
I’m sure she wasawhore
ရှင်က သူက ရှင့်အတွက်
Sitting here and i’m waiting
Like jesus’ cup
And i’m just passing time
Posted on October 3, 2014 February 7, 2018 Categories jewel's songs ခံစားမှုများ, Uncategorized, Uncategorized3 Comments on ဂျူဝဲလ် | အခါလွန် Jewel | Just Passing Time
မင်းကို ထာဝရ ချစ်နေမယ်
ကဲလာပြန်ပြီ နောက်ထပ် ဂျူဝဲလ် ရဲ့သီချင်း လှလှလေး တပုဒ်။ တနေ့က သီချင်း ကို ဘာသာပြန်ပြီးကတည်းက သူ့ရဲ့အဲ့ဒီအခွေကို အခေါက်ခေါက်အခါခါ ပြန်နားထောင်ဖြစ်နေပြန်တယ်။ အကြိမ်အခါများစွာနားထောင်ပြီးသားပါ။ အပုဒ်တော်တော်များများလဲ ကြိုက်ပါတယ်။ ဒီတပုဒ်ကိုတော့ တော်တော် ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်။ ခဏခဏ ကိုနားထောင်ဖြစ်တယ် အထူးသဖြင့် ညနေဘက် ရုံးဆင်းအိမ်ပြန် ရထားဘူတာ ကို လမ်းလျောက်သွားနေချိန်တွေ မှာပေါ့။ သံစဉ်ရော စာသားရော သိပ်လှတယ်။ သူ့သီချင်း ကိုနားထောင်ရတာ ကဗျာ လှလှလေးတပုဒ် ကိုခံစားရ သလိုပဲ ညွှတ်နူးမှု ကိုပေးမယ်။ ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူးမှုကို ရစေတယ်။ ဒီတပုဒ်ကိုလဲခံစားကြည့်ပါ။ အဖွဲ့အနွဲ့လေးတွေဘယ်လောက်လှသလဲလို့ သူမို့လို့သာ ဒီလောက်လှတဲ့ စာသား ကို ဒီလောက်လှတဲ့ သံစဉ်နဲ့ ဖွဲ့နွဲ့နိုင်တာ။ ဥပမာ လေတုိုက်နေတာ ခံစားရရင် အဲ့ဒီနေရာ ကို ကိုယ်နမ်းနေတယ် မှတ်လိုက်ပါဆိုတာမျိုး။ နောက်ပြီး လင်မယား အချစ် နဲ့သားသမီး အချစ်ကိုလဲ ဖွဖွလေး ထိရုံ ပဲ ပြသွားတာ သိပ်လှတယ်။ ဒီအခွေကိုရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဂျူဝဲလ် က လက်ထပ်ပြီး တနှစ်လောက်အကြာပေါ့ ကိုယ်ထင်တယ် သူ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ သို့ ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားဆဲ ကာလမှာ သူ့ခံစားချက်တွေကို သီချင်းထဲ ထည့်ရေးတယ် လို့ ယူဆရပါတယ်။ ပထမ သားဦးလေးကို အခွေထွက်ပြီး ၁ နှစ်အကြာမှာ မွေးပါတယ်။
သီချင်းနားမည်လေးက ရိုးနေပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မတုံးမယ့်……
“မင်းကို ထာဝရ ချစ်နေမယ်”….တဲ့
ဘဝ က ပြန်ခေါ်တဲ့အခါ
တို့တွေ ဆိုင်ရာကို ပြန်ကြရမှာပေါ့
ရှည်လျားတဲ့ ညတာတွေကို …
လေညှင်းလေး မင်းကို ပြေးဆော့တာကို
အဲ့တာ ကိုယ်မင်းကို နမ်းနေလို့ပေါ့….
ကိုယ်ကလဲ ကိုယ်သိပ်ချစ်တာ ပြောမှာပေါ့
ကိုယ့်တို့ ချစ်တာကို မစစ်မှန်စေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
အချိန်နဲ့ နေရာတွေကို ကိုယ်ကျော်ဖြတ်လာမှာပေါ့
“မင်းကို ထာဝရ ချစ်တယ်” လို့ ပြောနေတာလေ…..
ရှေ့ နည်းနည်း ရစ်လိုက်ရအောင်ပါ
အဲ့နေ့ကို တို့ မှတ်မိနေသေးတယ်
လောကကြီးတခုလုံးမှာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်တဲ့
သူမလေးရဲ့ မျက်လုံးတွေ အပြုံးတွေက
မင်းကို ညို့ မြူထားသလိုပဲ
မင်းသွားဖို့ ကို တို့နှစ်ယောက်လုံး…
မင်း ဝမ်းနည်းတုံ့တုံ့ အပြုံးနဲ့ ချီပိုးပြီးတော့….
ဖေကြီးနဲ့ ဝေးနေတဲ့ အခါ သမီးလေး သိရမှာက…..
တကယ်လို့ ဘုရားပေးထားတဲ့တနေ့ ရောက်လာခဲ့ရင်
ကိုယ့်မျက်လုံးက အရောင်တွေ မှိန်ကုန်ရင်တောင်….
ကိုယ့်ဝိညဉ်က အသိအမှတ်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ….
Fast forward our love story
Said while we’re apart I want you to know that…
သီချင်းလေးပါ ခံစားနိုင်အောင် သင့်ရဲ့ ပြွန်ကနေ ရှာထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်
အော်ရီဂျင်နယ် အမ်တီဗီတော့ မရှိဘူး ဒီတပုဒ်က
Posted on August 15, 2011 February 7, 2018 Categories jewel's songs ခံစားမှုများ, Uncategorized, Uncategorized2 Comments on မင်းကို ထာဝရ ချစ်နေမယ်
၁ ကနေ ၁၀
အော်ရီဂျင်နယ် စင်ဂဲလ် အယ်ဘမ် ကာဗာလေးပါ။
တလောက ကိုယ့်စာတွေကို ပုံမှန်ဘတ်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ဖဘ က သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ ရီလေးရှင်းရှစ်ပ် အကြောင်းရေးထားတဲ့ ဂျူဝဲလ် ရဲ့ နောက်ဆုံး အခွေ က သီချင်းလှလှလေး တပုဒ် ကို ဘာသာပြန် ပေးအုံးမယ် ပြောဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဂျူဝဲလ် ရဲ့သီချင်း လှလှလေး နောက်တပုဒ်ပါ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် ပြန်ချင်တာတွေတော့ ဒီတပုဒ်တော့ အရင် ပြန်ဖြစ်တာပေါ့ အတွေးလေး ကိုချစ်လို့ပါ။
အင်တာဗျူးတခုမှာတောင် ဂျူဝဲလ်က ပြောပါသေးတယ် သူ့ နဲ့ သူ့ယောက်ျား ရန်ဖြစ်ကြရင် သူ့ယောက်ျား က သူ့ ကို အမြဲပြောတယ်တဲ့ ၁၀ ထိ ရေနော် ၁၀ ထိရေ ဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်တဲ့။ အဲ့လိုပြောရင် ဂျူလ်ဝဲလ် က ပို စိတ်တိုတဲ့ ကြားက ပြုံးမိတတ်ပါသတဲ့။ ကဲ အဲ့တော့သူဘာ့ကြောင့် အဲ့လိုပြောတာလဲ သူဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတာ….သူတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးနဲ့ တူတူ တီတို့ လဲ ခံစားကြည့်ကြရအောင်နော်……အခု ဒီ ပိုစ့်ကိုရေးနေရင်းနဲ့တောင် သူ့သီချင်းလေး ကိုဖွင့်ထားပါတယ်
ပုံကို ဂူဂဲလ် ကနေရှာထားတာပါ မှော်ဝင်နေသလို ဂစ်တာနဲ့သီချင်းဆိုတတ်တဲ့ သူ့ပုံစံ ကို သိပ်ကြိုက်ပါတယ်
အချစ်ကို လွယ်တယ်ပြောတဲ့ လူတွေဟာ တကယ်မချစ်ဘူးကြလို့ပဲ ဖြစ်ရမယ်
တခါတရံ အချစ်က မိုင်းကွင်းလိုပဲ ခြေလှမ်းတချက်မှားတာနဲ့ အကုန်လုံးကို ပေါက်ကွဲသွားစေနိုင်တယ်
စကားတခွန်း၊ အကြည့်တချက်ကတောင်၊ ဗုံးစာ ကို မီးတို့ လိုက်သလိုဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါပဲ…..
မင်းဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန်မှာဆိုရင် မင်းမှာ ရှိနေတဲ့ တကယ့်အရာ ကိုမမြင်နိုင်သလိုပေါ့
နှစ်ယောက်စလုံး နောင်တရမယ့် အပြောအဆို အပြူအမူတွေကိုလဲ အလွယ်တကူ လုပ်မိနိုင်တယ်လေ
ခဏရပ်၊ သေချာတွေး မထွက်သွားခင် ၁၀ ထိရေတာကောင်းမယ်…..
၁… မင်းကို မုန်းချင်နေတုံးပဲ
၄… တံခါး ကိုရှာနေပြီ
၅… မင်း မျက်ဝန်းတွေထဲကို စိုက်ကြည့်ပြီး
၇… ခြေတလှမ်းလောက် နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်
၈… ၉ … လောက်ရောက်တော့ ဘာလို့ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာတောင် မသိတော့ပဲနဲ့…
၁၀…လဲရောက်ရော မင်းရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ ကိုယ်ပြန်ရောက်နေပါရောလား….
တို့တွေ ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခါတိုင်းမှာ စကားလုံးတွေနဲ့ လက်နက်တွေလို ရက်ရက်စက်စက် ထိုးနက်တတ်ကြတာကလား
တခါတခါ သူတို့ က ဒဏ်ရာနက်နက်တွေ ပေးတတ်လွန်းလို့
နောက်တခါကျရင် အဲ့လို မပြောဖြစ်အောင်
ကိုယ် ၁ ကနေ ၁၀ ထိ ရေ အုံးမယ်
တခါတခါမှာ တို့တွေတန်ဖိုးမထားတဲ့ အရာတွေကို တို့တွေပဲ ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်
မင်းနဲ့ တို့နဲ့ ကြားမှာတော့ အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးလေ
ငါ့ရဲ့ ကံကောင်းခြင်းလေးတွေကို ခြွေတာ မှဖြစ်မယ်
၁… မင်းကိုယ့်ကို ခံစားစေနေနိုင်တုံးပဲ
၂… ၃… ကိုယ့်ကို ကြက်သီးမွှေးညှင်း ထစေနိုင်တုံးပဲ
၄… မင်းကိုယ့်ကို ပိုပိုပြီးတော့ လိုချင်စေနေတုံးပဲ….
၅…မင်းရဲ့ မျက်ဝန်းတွေ ထဲကို ကိုယ်စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမျိုးမှာပေါ့….
၆… မင်းက ကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းပါ
၇…အဲ့တာက ဘယ်တော့မှ မပျောက်ကွယ်မယ့် အမှန်တရားပါ
၈… ၉ … ဘာ့ကြောင့်မှန်းမသိပေမယ့် အခေါက်တိုင်း အဲ့လို ပြန်ချစ်ကြတဲ့အတွက်တော့ ဘုရားသခင် ကို ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၁၀ ရောက်တဲ့ အခါတိုင်း ….
၁၀ ရောက်တဲ့ အခါတိုင်း….
ကိုယ်ဘယ်လောက် ကံကောင်းလဲ ကိုယ်ပြန်မြင်ယောင်လာတယ်
တကယ့်လို အစကနေပြန်ရွေးရမယ် ဆိုရင် လဲ မင်းကိုယ်ပဲ ကိုယ် အခါ တသောင်း ပြန်ရွေးမိမှာပဲ….
It’s hard to see just what you have, when you’re seeing red;
And it’s easy to do something that you know you both will regret;
Eight, nine, I don’t know why, we even started this fight;
By the time I get to ten, I’m right back in your arms again.
That I’ve to count to ten, before I cross that line.
You can lose what you’re not thankful for,
I don’t want that to happen to you and me,
Four, you keep me wanted more;
Five, when I look into your eye;
Six, you’re my best friend;
Eight, nine, I don’t know why,
but thank God it happens every-time;
I can see how blessed I’ve been.
I’d chose you all over again…
အော်ရီဂျင်နယ် အမ်တီဗီ လေးလဲကြည့်လိုက်ကြပါအုံးနော်…
Posted on August 2, 2011 February 7, 2018 Categories jewel's songs ခံစားမှုများ, Uncategorized, Uncategorized4 Comments on ၁ ကနေ ၁၀
မင်းကို တို့ တနေရာရာမှာ တွေ့မယ်လေ
ပြီးရင် တို့ ကို ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်စေဖို့
မင်းကို တို့ ခွင့်ပြုပါ့မယ်
ဆူးတွေ ရှိတယ် ဆိုတာ
မင်းဆီမှာ တို့ ကျဆုံးနေပါပြီလေကဲ အဲ့ဒီတော့
တို့ ခံစားရပါတယ်ရေမှုန်တွေ ရဲ့အနမ်းတွေက
တို့ ရဲ့ ဝိညဉ် ကိုလဲ
တခါ ပြန်ခံစားခွင့်ပြုပါ….. ကဲပါလေ
တို့ ကို တခါလောက်တော့
တခါ ပြန်ခံစားခွင့်ပြုပါ….. မင်းရဲ့ အချစ်တွေကို
But I’m lost to you now
I’ll let you make me
Feel your love again Feels like being underwater
Now that I’ve let go
Water fills my soul So break me
Feel your love again Kiss me once
Posted on May 13, 2011 February 7, 2018 Categories jewel's songs ခံစားမှုများ, Uncategorized, UncategorizedLeaveacomment on တို့ကို ချိုးဖဲ့ပါ
ဂျူဝဲလ် ရဲ့ သီချင်းစာသားတွေ က အမြဲလိုလို ကဗျာဆန်ဆန် လှပနေလေ့ရှိပါတယ် သူ့ သီချင်းနားထောင်ရတာ ကဗျာ ကောင်း တပုဒ် ကို ဘတ်နေရသလို ခံစားချက်အမြဲပေးတယ်။ သူ့ကဗျာတွေကျတော့ ဖွင့်လှစ်မှုတွေများတဲ့ အတွက် တချို့ က မကြိုက်ကြပြန်ဘူး။ ကိုယ်ကတော့ ရှိတည်မှု နဲ့ ဖြစ်တည်မှု အမှန်တရား ပြကတိ စတာတွေ ကိုနှစ်သက်တဲ့ အတွက် ကြိုက်ပြန်ပါတယ်။ ဆေးက ခါးသလို အမှန်တရားဆိုတာလဲ အမြဲ မလှပနိုင်ဘူးလေနော်။ ခုလဲ သူ့သီချင်းတပုဒ် ကိုနားထောင်နေရင်း စာသားလေးတွေ အရမ်းလှလို့ မျှဝေ ခံစားချင်မိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘလောခ် ကိုလာဘတ်တဲ့ သူတွေ ကိုယ်နဲ့ ရင်ခုန်သံချင်း တူတဲ့သူတွေ ကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူရဲ့ ကဗျာတွေ နဲ့ မတူတာက သူ့သီချင်းစာသားတွေမှာ သူပေးချင်တဲ့ မက်စေ့ရ်ှတွေနဲ့ အတူ စေတနာ တွေကို တွေ့ရပါတယ် ဒီသီချင်းလေးက သူ့ လောလောလတ်လတ်မှ ထွက်ထားတဲ့ sweet and wild ဆိုတဲ့ အခွေထဲက ပါ။ မယ်လိုဒီအနေနဲ့ ကိုယ်ပထမဆုံးစွဲငြိတဲ့ သီချင်းမဟုတ်ပေမယ့် စာသားအနေနဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကို သေချာ နားထောင်မိတဲ့ တပုဒ်ပါ။ ဒီတပုဒ် ကိုကြိုက်သလို ကျေနပ်ခြင်း (satisfied) ဆိုတဲ့ နောက်တပုဒ် ကိုလဲ ကြိုက်မိပါတယ် ကြုံရင် ဘာသာပြန်ပေးပါအုံးမယ် ဘာသာပြန်တာကောင်းရင် မူလစာသားကောင်းလို့ ဖြစ်ပြီး တခုခုလွဲချော်မှု ရှိရင် ကိုယ်ညံ့လို့ပါ။ သီချင်း ရဲ့ ပထမ အပိုဒ် ကို ဘာသာပြန်နေရင်းနဲ့လဲ သူပြောချင်တာကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာကို ကိုယ်နားလည်ရက်သားနဲ့ (အင်မတန်ကြွယ်ဝတဲ့ မြန်မာ ဘာသာ နဲ့) တိတိပပ ကိုယ်ဘာသာ မပြန်နိုင်သလိုခံစားရပါတယ် ကိုယ်လိုနေသေးတယ်….. မင်း… ဘာလဲ ဆိုတာ…? ကိုယ်မြို့ကို ပတ်ရင်းကားလျောက်မောင်းနေတယ်
ဘတ်စ်ကား ဂိတ်ရဲ့ ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ကိုမြင်မိတယ်
သူမ လိုချင်တဲ့ အရာတွေ က သူမဆီမှာ ရှိနေပြီးသားပါဆိုတာကိုသေချာနားလည်သဘောပေါက်အောင်ပြောချင်ပြချင်မိတယ် ကြယ်က ကြယ်ဖြစ်ကြောင်း ပြဖို့ အတွက် လင်းပြနေဖို့မလိုပါဘူး ရေဆိုတာ စီးဆင်းနေသလိုပဲ ငှက်ကလေးကလဲ ဘယ်လို ပျံရမလဲဆိုတာ သင်စရာမလိုဘဲ သိပါတယ် ပန်းပွင့်လေး ကို ဘယ်လိုပွင့်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြစရာမလိုသလို အလင်း ကိုလဲ အခန်းတခုလုံး လင်းချင်းနေအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ ပြောစရာမလိုပါဘူး မင်းက မင်းပါပဲ မင်းက ဘာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ လှနေပြီးသားပါ တနေ့က မြို့ထဲက စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ကနေ ဇာတ်လမ်း တပုဒ်ကြားရတယ် အဖေ က မျှော်လင့်ချက်သိပ်မရှိတော့တဲ့ သူ့သား ကိုပြောနေတာပေါ့ ဒီမှာသူပြောနေတာလေးပါ။ ။ “ဒီလိုမဖြစ်သင့်ပါဘူး… သားက သွားဖို့ ငယ်ပါသေးတယ် ဖေဖေ မခံစားနိုင်ဘူး သားရယ်” လူငယ်လေးက သူ့အဖေ ကို ဒီလို ပြန်ပြောပါတယ်။ ။ “မငိုပါနဲ့ ဖေဖေရယ် ၊ ဖေဖေမှတ်မိသေးလား သားငယ်ငယ်လေးတုံး ဖေဖေပြောပြတာတွေလေ ဖေဖေ ကို “ဘာ့ကြောင့်လဲ…?” လို့မေးတော့ ဖေဖေက…. ကမ္ဘာ့ဆွဲအားက ဆွဲအားသာပါပဲ မင်းကို သူက ဆွဲမချနေပါဘူးတဲ့ ကျောက်တုံးကလည်းပဲ ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ အတွက် သူနေ့ရာမှာဘဲ သူ မတ်မတ်ရပ်နေရတာပေါ့ မင်းမမြင်ရပေမယ့်လဲ လေကတော့ တိုက်နေမြဲပါ နေရာတကာ မှာ အမြဲ ငါရှိနေသလိုပေါ့ မင်းက မင်းပါပဲ မင်းက ဘာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ ကြံ့ခိုင်နေပြီးသားပါ မှန်ထဲကို ကြည့်လိုက်ရင် ပြောပြစရာ နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်း တပုဒ်ရှိပါသေးတယ် သူများတွေ ကို အချစ်တွေ ပေးနေသလောက် ငါ့ကိုယ်ငါတော့ ငရဲပဲပေးနေသေးတယ် ငါ့ကို ငါပြောရမှာ တခုက အစေ့တိုင်းမှာ ပြည့်စုံတဲ့ အပင် တပင် ပေါက်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် ငါဖြစ်ချင်တဲ့ အရာမှန်သမျှ က ငါ့မှာ ဖြစ်နေပြီးသားပါ ပြည့်စုံပြီးသားပါ ပန်းလေးတပွင့် က ပန်းလေးတပွင့်ပါပဲ ပန်းဖြစ်ကြောင်း ပွင့်ပြနေစရာ မလိုပါဘူး အလင်းကလဲ အလင်းပဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အခန်း ကို ဘယ်လို ဖြည့်ပြီး လင်းချင်းပစ်ရမလဲ သိပါတယ် အမှောင်က လဲ အမှောင်မို့လို့ သာ ကြယ်တွေ အတွက် လင်းစရာနေရာ ပေးနိုင်တာပေါ့ လှိုင်းတွေ က ပင်လယ်ထဲ ပြန်ပြေးထွက်သွားကြတာ ကမ်းခြေ ကိုနောက်တခါ ထပ်လာနိုင်အောင်ပါ နှုတ်ဆက် ခွဲခွာခြင်း က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်း ကို ပိုမို ချိုမြ လှပစေပါတယ် အချစ်ကလဲ အချစ်ပါပဲ အဲ့တာကြောင့် ငါတို့တွေ ကို သင်ကြားပေးနိုင်တာပေါ့ ငါတို့ဟာ ငါတို့ အဖြစ်နဲ့ပဲ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝနေပြီးသားဆိုတာ လှပ နေပြီးသားဆိုတာ ကြံ့ခိုင် နေပြီးသားဆိုတာ ကောင်းမွန် နေပြီးသားဆိုတာ တော်သင့် နေပြီးသားဆိုတာ တွေကိုပေါ့ A Chen 4:06 PM Jan 31 st 2011 Monday Bangkok What You Are I’M DRIVING AROUND TOWN
WHAT SHE WANTS IS ALREADY THERE A STAR IS A STAR
AND WHAT YOU ARE – IS BEAUTIFUL I HEARD A STORY THE OTHER DAY
YOU CAN’T GO FIRST, I CAN’T HANDLE IT
WHEN I’D ASK WHY, YOU’D SAY… GRAVITY IS GRAVITY
AND WHAT YOU ARE – IS STRONG ENOUGH LOOK IN THE MIRROR
WHAT I HOPE TO BE I ALREADY AM A FLOWER IS A FLOWER
AND WHAT WE ARE – IS BEAUTIFUL
AND BRIGHT ENOUGH… အောက်ခြေမှတ်စု About VA* Mission Statement To fulfill President Lincoln’s promise “To care for him who shall have borne the battle, and for his widow, and his orphan” by serving and honoring the men and women who are America’s veterans. Vision To provide veterans the world-class benefits and services they have earned – and to do so by adhering to the highest standards of compassion, commitment, excellence, professionalism, integrity, accountability, and stewardship. Core Values Compassion: We will treat all veterans and their families with the utmost dignity and compassion. We will provide services inacaring manner, withasympathetic consciousness of others’ distress together withadesire to alleviate it. Commitment: Veterans have earned our gratitude and respect. Their health care, benefits, and memorial service needs to drive our actions. Excellence: We strive to exceed the expectations of veterans and their families.We strive to perform at the highest level of competence and take pride in our accomplishments. Professionalism: Our success depends on maintainingahighly-skilled, diverse, and compassionate workforce. We fosteraculture that values equal opportunity, innovation, and accountability. Integrity: We recognize the importance of accurate information. We practice open, truthful, and timely communication with veterans, employees, and external stakeholders. By carefully listening and responding to their concerns, we seek continuous improvement in our programs and services. Accountability: We will perform inamanner at all times that makes us accountable, responsible, and answerable to veterans and their families, our leaders and other employees as well as external stakeholders. Stewardship: We will ensure responsible stewardship of the human, financial, and natural resources as well as data and information entrusted to us. We will improve performance through the use of innovative technologies, evidence-based medical practices, and sound business principles.
Posted on January 31, 2011 February 7, 2018 Categories jewel's songs ခံစားမှုများ, Uncategorized, Uncategorized1 Comment on မင်း… ဘာလဲ ဆိုတာ…?
မအိပ်ပါဘူး ရည်ရွယ်ချက်က အကြွေးကျန်နေတဲ့ Report ကို အပြီးရေးမယ်ပေါ့ နောက် ချစ်သူ ပြည်တော် ပြန်သွားတော့
ကုတင်ကြီးက ကျယ်နေတော့ အိပ်မရတာလဲပါပါတယ် ထမင်းတောင် တယောက်တည်း အထီးကျန်ကျန် TV နဲ့ စားရတာပဲလေ
အရင်က ကျင့်သားကျနေတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကလဲ အသစ်တဖန် ပြန်လေ့ကျင့်ရတော့မလိုပါပဲ
ဒီလိုနဲ့ အထီးကျန်ညမှာ တကိုယ်ရည်တကာယ နဲ့………………
TV ရယ် ကိုယ်ရယ် အေးစက်စက်ထမင်း ပန်းကန်ရယ် ကွန်ပျူတာရယ် ကိုယ်ရယ် မင်းမရှိတဲ့ညရယ် သက်ပြင်းမောတွေရယ် အထီးကျန်မှုရယ် ကိုယ်ရယ် သီချင်းတွေရယ် ကိုယ်ရယ် “မင်းမဲ့ည” ရယ်
နောက် အရင်ကတည်းက ရေးမယ် ကြံနေတဲ့ jewel ရဲ့ သီချင်းနောက်တပုဒ်ကို ဘာသာ ထပ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်
ခုနက တပုဒ်က မရည်ရွယ်ပဲ ပြန်ဖြစ်တာပါ မရည်ရွယ်တာတော့လဲမဟုတ်ဘူး ဘယ်လိုပြောမလဲ အရင်ပြန်ဖို့တော့ မရည်ရွယ်ထားဘူး
ဒီတပုဒ်က ပြန်ချင်တာတော့ ကြာနေပြီ အဲ့လိုပြောရင် ပိုမှန်မယ်
အဲ့တာနဲ့ ရေးဖြစ်ပြန်ပါတယ် ဒီသီချင်းလေးက တယောက်သောသူအတွက်ကိုယ့် ကိုယ်စားစကားတွေပြောနေသလိုပါပဲ
မင်းကတော့ နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
ငါ့ကို အဲ့လို မကြည့်ပါနဲ့
ငါ့ကို အရမ်းချိုမြန်တဲ့ အနမ်းတွေနဲ့ မနမ်းပါနဲ့
သိန်းသောင်းမက ငါ…ထပ်ထပ် ထပ်ထပ်
ပြီးတော့ ငါ့ကို အဲ့လို မထိ မကိုင်ပါနဲ့
တခြား တခြားသော ထိတွေ့မှုတွေကို
ပန်းလေးတွေ ယူ ယူမလာပါနဲ့
မင်း ငါ့ကို ပြောပြောနေကြ
ချိုမြိန်တဲ့ ပျားသကာ စကားလေးတွေကိုပဲ
မင်းရဲ့ လက်တွေက ငါ့အကြောင်း
ငါ့ရဲ့ နှလုံးသားလေးရှိနေတာ သိနေပေးပါ
လှန်လို့ မှောက်လို့ရတဲ့ ရေတပေါက်ပါဆိုတာကလွဲရင်
မင်းရဲ့ လက်တွေဟာ ငါ့ဆံနွယ်တွေကြားမှာ ရှိနေပေမယ့်လဲ
ငါ့ရဲ့ နှလုံးသားကတော့ မင်းရဲ့ သွားကြားမှာ မို့လို့ပါ
(Jewel ရဲ့ Near You Always သီချင်းစာသားကို ဘာသာပြန်ခံစားသည်)
Near You Always Lyrics
Please don’t say I love you,
Please don’t kiss me so sweet
It’s nothing that I understand, but when in your arms
So be gentle if you please, ’cause
Posted on February 7, 2010 February 7, 2018 Categories jewel's songs ခံစားမှုများ, Uncategorized, Uncategorized1 Comment on မင်းရဲ့ အနားမှာ အမြဲတမ်း….
ဥပမာနော် မြန်မာပြည်သိန်းတန်ရဲ့ မန်းမြေမှာ လေးနှစ်တာ ….
Posted on February 7, 2010 February 7, 2018 Categories jewel's songs ခံစားမှုများ, Uncategorized, UncategorizedLeaveacomment on ဂျူဝဲလ်ရဲ့ လက်များ